Ndị na - emepụta China na - ebuputa ihe mkpuchi na ndị na - eweta ngwaahịa | Jiuhe
DIN6921 Flange Bolt nwere ọrụ nke ịkwụsị ntụgharị, nke dị maka elu nke akụkụ njikọ ahụ chọrọ ala dị larịị ma ọ bụ nke dị larịị. Na mgbakwunye, DIN6921 Flange Bolt zuru oke maka ntọala agbakwunyere agbakwunyere, a na-arụkwa ya iji dozie ntọala nke igwe na akụrụngwa. N'ihi nha kwesiri ekwesi na kọmpat, enwere ike idobe ya ebe niile iji nyere aka ịhapụ oghere nke ebe amachaghị. Ọdịdị nke sliver ahụ dị mma ma mara mma.
* Njirimara Ngwaahịa
* Nkọwapụta Ngwaahịa
DIN6921 Flange Bolt nwere usoro dị elu, nke nwere ogologo ọrụ ọrụ maka iji ya na enweghị mkpa pụrụ iche iji nọgide na-enwe. Na mgbakwunye, ọ na-achọpụta ọrụ ahụ iji mepụta oghere plọg na nkedo mkpọchi ahụ. N'ihi arụmọrụ dị elu ma nwee ntụkwasị obi, ọ nwere ike idozi ọnọdụ nke akụkụ nke njikọ ahụ, si otú a na-eguzogide ịsụ ntutu na ịpị n'akụkụ ụzọ. E jiri ya tụnyere ngwaahịa nkịtị n’ahịa, ọ dị mfe maka nrụnye na imechi ya ike, nke nwere ike ịbụ ezigbo ihe a na-eji emekarị maka ụlọ ọrụ ọkụ, akụrụngwa na mita na-ebughị ibu. Enwere ụdị nhọrọ nha dị iche iche, wee si otú a na-enyekwu ọtụtụ ihe iji gboo mkpa.
ebe mbido hebei, China (Chile)
ihe carbon dioxide dị ala, ígwè dị elu
ọkọlọtọ DIN, BS, ASME, NON-STANDARD
ụdị ihe nlereanya hexagon isi nut, hexagon bolt, arịlịka bolt, naịlọn nut
elu ọgwụgwọ onwe elu, zinc plated, ojii ojii, galvanized na-ekpo ọkụ
agba edo edo, acha anụnụ anụnụ na ọcha, ọla ọcha, nwa, ụcha onwe ya
ibu na nha Dabere na (EGO NA-EGO)
nyere iwu 1 ibe
nlele anyị na-enye ndị nlele n'efu
Nke gara aga: Boltanized mgbochi Bolt na-ekpo ọkụ
Osote: Ike di nkpa